Translate Haitian Creole to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Haitian Creole to Myanmar (Burmese), Haitian Creole to Myanmar (Burmese) translations, Haitian Creole to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Bonjou koman ou ye မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Èske gen moun? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Mwen renmen ou reyèlman anpil ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Konbyen saaanmbègè koute? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Èske ou ka rele m 'yon taksi? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Mwen regrèt ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး
Eskize m တဆိတ်လောက်
Mwen enterese ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Te vòl mwen an reta အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Mwen isit la pou biznis ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Bonjou, non mwen se မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Mwen regrèt, men mwen marye ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Mwen ta renmen mande w ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Èske ou ka pran m nan ayewopò a? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Ki sa ki tan an kounye a, tanpri? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Ki kote estasyon polis ki pi pre a? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Èske mwen ka prete plato telefòn ou tanpri? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Èske w ka ede m? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Lòd m 'yon bwè, tanpri? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Konbyen li koute? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Mwen alèjik gluten ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Rele yon doktè ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Èske gen yon doktè? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Èske mwen ka gen yon apèl? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Rele m 'bòs nan travay ou tanpri. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Kote saatrè bèl ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Pran m 'nan otèl la tanpri ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Ki kantite chanm mwen ye? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?